နံပါတ်များအတုလုပ်နည်း - Twitter နှင့် Facebook မှသင်ခန်းစာများ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 18, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
တစ်ခါတုန်းကအဲဒါဟာသရော်စာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့တယ် Facebook သုံးစွဲသူ ၃.၂၄% သေဆုံးခဲ့သည်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့တော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ကမကြာသေးမီကအသုံးပြုမှုနဲ့အကောင့်တွေထက်စုစုပေါင်းအကောင့်အရေအတွက်ကိုရေတွက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့နံပါတ်တွေကိုဆက်လက်မြင့်တက်စေခဲ့တယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြော်ငြာတွင်“ တက်ကြွသော Facebook အသုံးပြုသူ ၃၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်သို့ရောက်ရှိပါ” ဟုဖော်ပြထားသည်။ တကယ်လား ငါကြော်ငြာအတွက်စာရင်းသွင်းလျှင်, ကြောင်းကြော်ငြာ အသုံးပြုသူသန်း ၃၅၀ ကျော်ရှိလာမည်လား။ Facebook ကပိုကောင်းသင့်တယ်ထင်တယ် အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး သတ်မှတ် တက်ကြွ အသုံးပြုသူမှာ.
သုံးစွဲသူသန်း ၃၅၀ ကျော်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ကြွသောအသုံးပြုသူ ၅၀% သည်မည်သည့်နေ့တွင်မဆို Facebook သို့ဝင်ရောက်ကြသည်
သုံးစွဲသူ ၃၅ သန်းကျော်သည် ၄ ​​င်းတို့၏ status ကိုနေ့တိုင်း update လုပ်ကြသည်
၅၅ သန်းကျော်သော status update များကိုနေ့တိုင်းတင်ခဲ့သည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ၁၇၅ သန်းလောက်ပိုများနေတယ်လို့ငါထင်တယ် တက်ကြွ အသုံးပြုသူများ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာသူ့ရဲ့နံပါတ်များနဲ့တီထွင်ဖန်တီးနေရုံသာမကသင်၏အကောင့်ကိုဖယ်ရှားပစ်မည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုလိုက်နာရန်ရှေ့နေများကိုလည်းခေါ်ဆောင်လာသည်။ The Web 2.0 သတ်သေစက် တင်ခဲ့သည် အက္ခရာကိုရပ်ပါ Facebook မှ ဒီလိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းဟာရပ်ရမယ်။ သူတို့ကပိတ်ဆို့ပြီး C&D ကိုပို့လိုက်တယ် ဇန်နဝါရီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ကကြိုးစားနေသည် သူတို့ရဲ့အလိုအလျောက်သူငယ်ချင်းရှာဖွေသူမှတစ်ဆင့်ကလေးမွေးစားခြင်းများကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ပါ.
တွစ်တာသည်တန်ဖိုးတူသောရှေ့နေများထံမှသင်ခန်းစာယူခဲ့ပုံရသည်။ တွစ်တာသည် autofollow ယန္တရားကိုနှစ်သက်သည်။ သို့သော်သူတို့၏ခွေးများကိုအလိုအလျောက်အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် application များပေါ်တွင်လွှတ်တင်လိုက်သည်။
ငါသံသယရှိသည် တွစ်တာ နှင့် Facebook က ဆက်၍ ဆက်၍ တိုးတက်သည်။ ဒီတော့ဘာကြောင့်သူတို့ကဒီလောက်ကြီးထွားလာနေပေမယ့်ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုဖောက်ထွင်းဖို့ကြိုးစားနေတာလဲ။
အကြောင်းရင်းသုံးခု - တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း, ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ
အမှန်မှာ၊ သန်းပေါင်းများစွာသောအကောင့်စွန့်ခွာထားသောအကောင့်များရှိသည်၊ တွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တို့သည်ဤရုပ်ဆိုးသောဂိမ်းကိုကစားနေကြသည်မှာရှက်စရာပင်။ ၎င်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပွင့်လင်းရိုးသားမှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ရှက်စရာကောင်းပြီး၎င်းတို့အစားတာ ၀ န်ခံမှုရှိသင့်သည့်ဘလော့ဂ်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုပြုလုပ်သင့်သည် ။ ။ နှင့် နေပြည်တော် အားလုံးသူတို့အပေါ်မှာ။
ငါတို့ဒီမှာသတင်းစာလုပ်ငန်းအကြောင်းပြောနေတာ၊ သူတို့စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကသတင်းစာဖတ်ဖူးသူတိုင်းကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်သွေးထွက်သံယိုလူသတ်မှုကိုအော်ဟစ်ပြီးသူတို့ထဲကမကောင်းမှုကိုကြော်ငြာအတုအတွက်တရားစွဲမယ်ဆိုရင် ဒါပေမယ့်ဒါတွေကနည်းပညာရဲ့ရွှေရောင်ကောင်လေးတွေပါ။ ငါတို့ Twitter ကိုမလုပ်ပါဘူး
စျေးကွက်သမားတွေသတိထားပါ လူတစ် ဦး တည်းကသာဖေ့စ်ဘွတ်ကြော်ငြာကိုကျေနပ်အားရကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာကိုလွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူများအားကြော်ငြာများမနှိပ်လိုပါ။ ဒါဟာတောက်ပအလုပ်လုပ်နေပါတယ်၊ ဘယ်သူမှမနှိပ်ဘူး။
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်လိုလျှင်၊ သို့ သွား၍ ဇန်နဝါရီ သူတို့လုပ်ပေး - ကိုယ်တိုင်လမ်းညွှန်ချက်များပေးသည့် home page ။ လှပသောပုံရိပ်မှလာသည့်နေရာလည်းဖြစ်သည်။
18:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 16
အာမင်။ နာမည်ကြီးတွေသာမကဘဲ စျေးဆိုင်ငယ်များပင်လျှင်တူညီသောလှည့်စားမှုကိုခံကြသည်။ အွန်လိုင်းဂိမ်းများကိုသာရှာဖွေပြီးသင်တွေ့သည့် site တိုင်းသည်သန်းပေါင်းများစွာသောဂိမ်းများကိုကစားနေသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်။ သန်းနှင့်ချီသောသူတို့သည်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဂိမ်းကိုကြိုးစားပယ်ဖျက်ရန်ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။
BTW, ဒီမှာစဉ်းစားစရာနောက်တစ်ခု။ ငါ့မှာ Facebook အကောင့်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် Trillian ကတဆင့်လူတွေဆီကနေမွမ်းမံချက်တွေရဖို့အဲဒါကိုပဲသုံးတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် update မတင်ပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်သည် Trillian မှတဆင့်နေ့တိုင်းနီးပါး login ၀ င်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုတက်ကြွသောအသုံးပြုသူအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်ပါသလား။ ငါကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် pageviews login နှင့်ပေးခဲသည်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါကတစ်မိနစ်ထပ်တိုးအသုံးပြုမှုကိုထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ကျွန်မရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဟာပျမ်းမျှဆယ်ကျော်သက် (သို့) သင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်စကြဝuniverseာမှာအစက်အပြောက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ 😛
19:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 31
Facebook မှာတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူ ၁၇၅ သန်းရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ "active" အသုံးပြုသူရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုအနည်းငယ်ရယ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နေ့တိုင်း * Facebook သို့ဝင်ရောက်ရမည်။
ဇန်နဝါရီ 20, 2010 မှာ 12: 41 AM
Ryan ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူဆိုတာဘာလဲ? အကယ်၍ တက်ကြွသောအသုံးပြုသူသည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ ၀ င်ရောက်သောသူဖြစ်ပါက ၄ င်းတို့၏သန်း ၃၅၀ အရေအတွက်ကိုထပ်တိုးနိုင်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဒါကငါ့ပို့စ်ရဲ့အဓိကအချက်ပဲ။
Twitter သည်တတိယပါတီ application များမှတဆင့်အလိုအလျောက်နောက်လိုက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်နှင့်မြှင့်တင်သည်။ သင်ပို့လိုက်သော link သည် 'ရန်လိုသော' auto-following ကိုသာရည်ညွှန်းသည်။
Social-Too သည်အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါ၊ သင့်နောက်လိုက်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရုံသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ခွင့်မပြုသနည်း